Madaxdhaqameed baaq ka soo saaray xiisada u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland
“intaynu sharka madax u noqon lahayn, aynu kheyrka mijo u noqonno…”. Boqor Faysal Cismaan
Burco(GNA)-Boqor Faysal Cismaan Faarax oo kamid ah Madaxdhaqameedka Somaliland, ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalka u dhexeeya Somaliland iyo Maamul-goboleedka Puntland,isagoo u soo jeediyey in arrimaha uu salka ku hayo lagu xaliyo wadahadal iyo nabad.
Boqor Faysal oo Bayaan Qoraal ah soo saaray, ayaa sidoo kale farriin u diray dhinacyada doorka ku leh xiisadaas oo uu ku waaniyey inaanay colaad hurin ee ay xasiloonida ilaalinteeda qayb ka noqdaan.
Boqorka ayaa qoraalka ku soo bilaabay: “Waxan ugu baaqayaa meel kasta oo lagaga hadlo afsoomaali nabad, nabad.. waayo waa waxa dhammaanteen inna anfacaya adduun iyo aakhiraba waa nabad. waxan si gaara ugu sii baaqayaa Somaliland iyo Puntland labadaba waxan leeyahay xabbadi xal maaha ee dhawra darisnimada muslinnimada, wada dhalashada, xididnimada iyo nabad-galyada qaan gaadhka ah ee ka jirta Deegaanka.
Waxa kale oo aan leeyahay labadaba joojiya hadallada xanafta leh ee saxaafadda laysu marimayo. dhulku guuri maayo, dadkuna dhamaan-maayo afkaaraha iska soo horjeeda ee ku kala salaysan xuduudka oo udub dhaxaad u ah doodda Somaliland iyo abtirsiinyaha Puntland.
Waxaan shaki kujirin in siidhiga cidda haysaa ka aamusantahay xaqiiqda inay ku dhawaaqdo.sidaa awgeed wax weedho ku dhamaan kara yaan dhiig lagu daadin. sidoo kale Garaaddada la siggay sida la sheegay inay hadlaan waa wax wayn si loo fahmo hadday jiraan wax dahsoon. hashu maankayga gaddaye ma miishaarbay liqday! “intaynu sharka madax u noqon lahayn, aynu kheyrka mijo u noqonno”. Ayuu yidhi Boqor Faysal Cismaan Faarax.
Previous: Daawo: Golaha Wakiilada oo shaaciyay Xilliga La Ansixinayo Golaha Wasiirada Xukuumada Muuse Biixi
Next: maayir Soolteeko oo ka Hadlay Kulan uu la qaatay Gudida Deegaanka Golaha wakiilada